Siedlisko Natura - indlu entle
Żukowo Morskie, West Pomeranian Voivodeship, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAgata
Siyakumema kwindlu yethu entle.
Umgangatho ophantsi we-cottage u-glazed, ukusuka ekhitshini kunye negumbi lokudlela lijonga i-greengrocer eneziqhamo zeziqhamo (i-currants, i-raspberries kunye ne-blueberry enye). Phezulu kukho amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela. Amagumbi okulala makhulu - ngalinye limalunga ne-20m2.
Indawo ye-cottage yi-75 sq m (amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela). Kukho igriza, amabala okudlala, indawo yomlilo, iibhayisekile ezifumanekayo xa uzibeke ngaphambili)
Indawo enkulu ejikeleze izindlu - isiza esingaphezulu kweehektare ezi-4. Iifestile ezijonge kwintlambo yoMlambo iGrabowa. Abatyeleli rhoqo ngamaxhama, iicranes, iingwamza kunye nemivundla. Sincoma ama-raspberries ngqo kwihlathi kunye nobusi kwi-apiary yomninimzi.
Sincoma ngokukodwa kubantu abafuna ukuphumla kwisifuba sendalo kwaye bathande ulwandle.